Cuntada: Waa maxay Spam Bot iyo Sida loo Xakamaynayo
Haddii aad gasho xisaabta Google Analytics oo aad ku aragtay ficil degdeg ah kulanno, fursadaha waa bots iyo spam gudbinta ayaa ku dhuftay websaydhkaaga. Markaad eegto, waxaad dareemi kartaa in ay kuu heli doonto iibka iyo hoggaamiyeyaasha, laakiin aad u eegto meel ka mid ah ilaha kulamada waxay ku siin doonaan fikrad ah meesha gaadiidka uu ka imaanayo. Iskoolada ayaa inta badan masuul ka ah gaadiidka bogga tayada hoose . Sanadihii ugu dambeeyay, dad badan oo websaydh ah ayaa ka cabanaya in xayeysiiska spam gudbinta ay ku wareegaan goobahooda waxayna u egtahay sida shakhsiyaadka dhabta ah ay soo booqdeen boggaga internetka. Koofiyadaha madow ee SEO iyo xayawaannada xun ee spam waxay ku dhufan karaan xogtaada Google Analytics tiro badan. Intaa waxaa dheer, xirmooyinkaasi waxay u muuqdaan markii ay booqdeen boggaaga dhowr jeer, hase yeeshee heerka qiyaasta waa 100% - south america sightseeing. Waxaa lagugu siiyay macluumaad aan fiicneyn, iyo darajadaada bogga waxay billaabmaysaa maalin maalmaha ka mid ah.
Waa maxay Spam Bot?
Frank Abagnale, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Macaamiisha, wuxuu sharxayaa in bots ay yihiin barnaamijyo automated kuwaas oo awood u leh in ay fuliyaan tallaabooyinka iyaga oo aan wax talooyin ah oo gacanta ah. Boorso ayaa ka mas'uul ah fulinta hawlo badan oo qofka dhabta ah uu ku buuxin karo saacado, maalmo ama toddobaadyo. Kootaradu waxay u baahan yihiin dhawr ilbiriqsi oo kaliya si ay u gutaan shaqooyin badan mar marka la abuuro si ay u booqdaan goobtaada si aan caadi aheyn.
Farqiga u dhexeeya Xagjirnimada iyo Dhaqanka Gaarka ah
Xuduudaha dhabta ah ama dhabta ah waxay ka tirsan yihiin raadiyaha s sida Bing, Yahoo, iyo Google. Waxay muujin karaan website-kaaga waxayna muujinayaan dhammaan boggagaaga natiijooyinka raadinta raadinta . Goobahaas wax dhib ah uma geystaan ​​goobtaada, halka qoryaha aan sharciga ahayni loola jeedo inay waxyeeleeyaan website-kaaga..Waxay u egtahay inay soo booqdaan goobtaada waxayna ku heli karaan aragtiyo badan, laakiin maaha kuwo degan oo lagu magacaabo bots negatives. Goobaha loogu talagalay spam ugu caansan iyo caanka ah waa event-tracking.com, free-share-buttons.com, social-buttons.com, darodar.com, iyo get-Free-traffic-now.com
Waxaa jira waxoogaa kala duwan oo ku saabsan shabakadahan, iyo URL-yadooda waxay ku muuqdaan xisaabta Google Analytics si toos ah. Haddii aad raacdo URL-yadooda si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan shirkadahaas iyo xirmooyinka xayeysiisyada, fursadaha waa inay waxyeeleeyaan website-kaaga. Tusaale ahaan, haddii aad aragto spam gudbinta (arag-your-website-here.com) ee koontada Google Analytics, waa inaad tirtirtaa sida ugu dhakhsaha badan.
Sidee loo xakameyn karaa boodhka spam ee xisaabta Google Analytics?
Ku dhowaad dhammaan bogagga gudbinta spam waa dambiilayaal waaweyn waana in laga saaraa sida ugu dhakhsaha badan. Haddii aad ku soo noqotid spam cusub oo laguu soo diro koontada Google Analytics, waa inaad soo saartaa, laakiin hoos u dhac ku yimaada nidaamkan ayaa ah in qatarta xun ay sii wadi doonaan booqashadaada mar labaad. Waxay micnaheedu tahay inay qaadan doonaan khayraadkaaga adeeggaaga waxayna saameyn doonaan xawaaraha xawaaraha ee goobtaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo faylka .htaccess si loo xakameeyo dhammaan bogagga spamka. Waxaa haboon in la sheego in faylka .htaccess uu yahay hab awood badan oo lagu xakamayn karo gebi ahaanba shaki laga galo. Talaabada ugu horeysa waa inaad geliso lambar qaas ah oo ku jira faylkaaga .htaccess. Haddii faylkanu si sax ah u shaqeynin, waa inaad faylasha cusub .htaccess faylkaaga u dirtaa xididka domainka.
Hab kale oo degdeg ah oo sahlan oo lagu xakameyn karo spam bot waa iyada oo la abuurayo shaandhayn heer sare ah koontada Google Analytics. Ku gal koontadaada adiguna riix 'Admin tab'. Laga soo bilaabo tan, waa inaad tagtaa Created View View cusub, oo hoos yimaada qaybta magaca warbixinta ee warbixinta, waxaad arki doontaa Spam Free button. Halkan waa inaad gujisaa Fursadda Cusub oo ha iloobin inaad magacawdo filterkaaga